K9 Shamwari dzevakaremara
K9 Shamwari dzevakaremara: Dzidza nezveSevhisi uye Therapy Imbwa
Posted on July 16, 2013 December 3, 2020 by csr 1687
Pachivanhu, imbwa dzinovaraidza dzinoyemurwa nehukama hwadzo nerudo. Ivo vanovimba zvizere nevaridzi vevanhu. Varidzi vanogona kusurukirwa dai imbwa dzaive dzisipo, asi zvaisazokanganisa mabasa avo ezuva nezuva. Nekudaro, hadzisi dzose imbwa dzinovaraidza. Izvi ndizvo zvazviri ne imbwa dzekubatsirandiko kuti, mhuka idzo dzinodzidziswa zvakanyanya kuti dzikwanise kuita mamwe mabasa. Kune akati wandei mhando, asi iwo makuru maviri mapoka imbwa dzebasa uye imbwa dzerapi.
Hukama pakati pe remara munhu uye imbwa yavo yebasa ndiyo symbiosis. Imbwa inobatsira munhu kuita mabasa aangatadza kuita uye mukutsinhana anogamuchira chikafu, pekugara, hutsanana uye rudo. Imbwa dzekushandira hadzisi mhuka dzinovaraidza uye nekudaro dzinobvumidzwa zviri pamutemo muzvitoro uye dzimba dzinogona kusatendera mhuka. Nekudaro, mutemo haushande kana imbwa iri nechisimba kana ichishanda senjodzi huru yehutano. Hazvina basa kuti imbwa yebasa ipfeke vesti kana tag, asi varidzi vazhinji vanosarudza kupfekedza imbwa yavo zvakadaro kuti vamwe vagone kuiziva. Zvisinei nekuzivikanwa, vanhu vazhinji, kunyanya vana, havazive hunhu chaihwo kana imbwa yebasa iri padyo. Vamwe vanoedza kuibata kana kutaura nayo, vachinyatso kuvhiringidza kubva pakuita basa rayo rakaitirwa. Maitiro aya anofanirwa kuodzwa moyo nemuridzi kuburikidza nekushandisa tsananguro yemazwi kana kadhi rehunhu. Imbwa dzebasa kazhinji kazhinji vafudzi veGerman, Labradors kana Golden Retrievers.
Kurapa imbwa kwakasiyana nembwa dzebasa nekuti ivo havana kudzidziswa kubatsira vanhu nezviitiko zvakasiyana. Panzvimbo iyoyo, imbwa idzi ndidzo dzvinyiriro dzinodzidziswa kuve "isina bhomba" pakurwisa kukwezva nekumbundira kwevana vadiki muzvipatara. Ivo dzimwe nguva vanotumirwa mumisha inochengeterwa vakwegura kubatsira varwere vane chirwere cheAlzheimer. Kusiyana nembwa dzebasa, mazhinji marudzi anogona kuve imbwa yekurapa ine dzidziso chaiyo.
Izvi zvinotevera zvinongedzo zvinotungamira ku imbwa yekubatsira zviwanikwa. Inosanganisirwa ruzivo nezve imbwa dzebasa, kudzidziswa kwavo uye nezvavanogona kudzidziswa kuita. Kune mhinduro dzemibvunzo inowanzo bvunzwa nezve rubatsiro mhuka. Zvakare akapiwa zvakanangana nezvemitemo inobvumidza kushandiswa kwavo pamwe nehunhu hwakakodzera kumuridzi neanoona. Iwo ekupedzisira mashoma ma link anotungamira kune ruzivo rwekuti munhu anokodzera anogona kunyorera sei rubatsiro mhuka.
Ndeipi dzidziso inofanirwa kupfuudzwa nembwa kuti ikwanise kuita semhuka yekushandira?
Rubatsiro Imbwa Ruzivo kubva kuMichigan State University
Service Mhuka uye Shamwari Imbwa runyorwa
Mhando dzeSevhisi imbwa
Sevhisi Imbwa Central Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo
Psychiatric Imbwa Mibvunzo
Mibvunzo Inobvunzwa Kazhinji
Kutora Alert Imbwa
Imbwa Kushamwaridzana uye Kubatsira kwayo kuvanhu
Tungamira imbwa vs. imbwa dzebasa
Imbwa dzebasa vs. imbwa dzerapi
Psychiatric service imbwa vs. imbwa dzerapi
Chii chinonzi imbwa yekurapa / mhuka?
Iwo matatu marudzi erapi imbwa
Imbwa dzeSevhisi Sevha Hupenyu!
Mutemo unotonga pamusoro pekuti "Hapana Imbwa Dzinotenderwa"
Maitiro ekudyidzana nemunhu ane imbwa yekubatsira
Sevhisi Imbwa Etiquette
Kunyorera Yekubatsira Imbwa
Kubata imbwa kukodzera uye kunyorera
Nyoresa imbwa yako yebasa
Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri na1800wiricheya; tinopa mavhiripu.
Kunzwisisa Autism Spectrum Dambudziko
Maitiro Ekurovedza muviri kana Uri Wiricheya Mushandisi